संघियता कर्मचारीको वोनसको लागि नभएर नागरिक सेवाका लागि हो - सुवेदी
2017-06-09 | तीतोपाटी डट कम
तीतोपाटी - पालको कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख अर्थात नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको सङ्घीयता र कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो अध्ययन रहेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी काम गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिन धुलिखेल पुगेका सुवेदीलाई भेटेर पत्रकार नरेश ज्ञवालीले गरेको संक्षिप्त अन्तरवार्ता।
देश सङ्घीयतामा गइसक्दासमेत कर्मचारीतन्त्रको बुझाइ विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ, यस्तो मानसिकताले सङ्घीयताको मर्मलाई कर्मचारीतन्त्रले कसरी पक्रन सक्ला ?
तपाईंको प्रश्नको बेसिस नै मिलेन । संविधान जारी भएपछि अहिले जुन पुनरसंरचना, कार्यविस्तृतीकरण जस्ता काम भए ती कर्मचारीकै अगुवाइमा भएका हुन् । सबैले तपाईंले भनेजसरी नबुझेको होलान्, होइन भने सबैकाममा कर्मचारीतन्त्र ‘प्रोएक्टिभ्ली’ काम गरी रहेको छ । सबै ठाउँमा समान बुझाइ नहुन सक्छ । तपाईंले सुन्नुभएकै होला, सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीजीले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दोरहेछ भनेर हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनमा पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ । तर प्रश्न के हो भने कर्मचारीमा भोलि ‘म’ कहाँ पर्छु भन्ने चिन्ता चाहिँ छ । त्यसले गर्दा फरक परेको हुनसक्छ ।
तपाईंले भनेको कुराको महसुस हामीलाई किन हुँदैन भने अधिकांश ठाउँका सामान्य, मध्यम र उपल्ला कर्मचारीसँग समेत कुराकानी गर्दा उहाँहरुले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हामीलाई अनुभूति हुन्छ, किन ?
कुरा के छ भने, एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरु हो । यो सङ्घीयता भनेको राजनीतिक सपना हो । उहाँहरुले कति गर्नुभयो त्यहाँबाट खोज्नुस् । तर कार्यान्वयनमा, बुझाइमा मान्छेपिच्छे फरक छ । मैले आफूले राखेको बैठकहरुमा पनि त्यो पाइएको छ । तर, अहिले धेरै परिवर्तन हुँदै आएको छ । अहिले सबै मन्त्रालयले आआफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । फेरि पनि प्रश्न के हो भने मन्त्रालयको अधिकार मन्त्रालयमै रहोस्, सङ्घीयताअनुसार मेरो मन्त्रालयलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञमा पनि बढ्तै छ । त्यसकारण त्यो नेतृत्व राजनीतिज्ञले गर्ने हो । यो हाम्रो कर्मचारीले त मन्त्रीजीले गर भनेपछि गर्नैपर्छ नि । तर हाम्रो मन्त्रालयले राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएकाले त्यसमा अलिक भिन्नता देखिएको छ । जुन रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ ।
स्थानीय शासन ऐन बन्न नसक्नुले के परिणाम निम्त्याउला भन्ने लाग्छ ?
यो ऐन हामीले संसदमा पठाइ नै सकेका छौँ । तर यो राजनीतिक प्रश्न हो । जब कि हामीले स्थानीय तह व्यवस्थापन ऐन बनाएर पठाएको एक महिना भइसक्यो । हामी त चुनाव अगाडि नै पारित गराउन चाहन्थ्यौँ । विभिन्न राजनीतिक कारणले संसदमा रोकिएको विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । हामीले त पाठाइसकेका छौँ । अहिले काम चलाउनका निम्ति हामीले गठन आदेश बनायौँ । त्यो ऐन नआएसम्म गठन आदेशले काम चलाउने भनेर पठाइएको छ । तर ऐन छिटो आउनुपर्छ । त्यो त राजनीतिक कुरा हो हामीले हाम्रो ठाउँमा भनिरहेकै छौँ ।
संविधानको अनुसूची ७ र ८ मा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यविस्तृतीकरण सूचीले सङ्कुचित गरायो भन्ने आलोचकहरुको भनाइ छ । तर तपाईंले त्यहाँ धेरै अधिकार दिइयो भनेर राजनीतिक दलहरुले मसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्नुभएको छ । तपाईंले भन्नका लागि जे भने पनि अधिकार त स्थानीय तहकै कुन्ठित हुने देखिन्छ होइन र ?
होइन, पहिलो कुरा तपाईं एकै चोटि ‘प्रफेक्सन’मा जान सक्नुहुन्न । जुन कार्यविस्तृतीकरणले भनेको छ, त्यति गरिसकेपछि पनि हेर्न सकिन्छ । अब भोलि त्यस्तो भयो भने प्रदेशको कानुन बनाउँदा कानुन पास हुँदा हेर्न सकिन्छ । तर यहाँ के छ भने एक्कै चोटि ‘प्रफेक्सन’ खोज्ने कुरा आयो । तर भएको अधिकार कति प्रयोग हुन्छ ? त्यो कुराहरु पनि आउनुपर्यो । क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो । यद्यपि क्षमता माथि पनि नभएर तल पनि नभएर काम नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस अर्थमा कार्यविस्तृतीकरण अहिलेका लागि महत्वपूर्ण छ । अब केही छुटेको छ भने राख्न सकिन्छ । गर्दै सिक्दै जाने हो नि ।
त्यत्रो कार्यविस्तृतीकरणले सङ्कुचित गरायो भन्नुहुन्छ भने संविधान आउनु भन्दा अगाडि नै आउनुपर्ने थियो र त्यसको सारसङ्क्षेप संविधानको अनुसूची हुनुपर्दथ्यो । हामीलेपछि कसरी मिलाउने भनेर झन् विस्तृत दस महिना लगाएर थुप्रै विज्ञ कर्मचारीतन्त्रले बनाएको हो । कुनै परामर्शदाता राखेको होइन । त्यस हिसाबमा सङ्कुचन भएको छैन कि विस्तृतीकरण भएको छ । व्याख्या र बुझाइमा भने फरक छ । फेरि अधिकार सङ्कुचा नै हुन गएको छ भने राजनीतिक रुपमा उहाँहरुले भोलि परिवर्तन गर्नुहुन्छ । त्यस्तो कुनै गारो विषय छैन ।
स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कतिपय ऐनहरु तपाईंहरु आफैले ‘नमुन ऐन’ भन्दै बनाउँदै हुनुहुन्छ । के यसले त्यहाँ स्थानीय तहमा आइरहेका राजनीतिज्ञहरुको अधिकार र कार्यक्षमतामा सङ्कुचन पैदा गर्ने सम्भाना रहँदैन ? किनभने केन्द्रले बनाएको नीति, नियम, ऐन स्थानीय स्तरमा हावी हुने परिस्थिति हुन्छ ।
नमुना ऐन भनेको के हो भने उसले बनाउने कुराको नमुना हो । उसले फाइनल गर्ने बेलामा परिवर्तन गर्न सक्छ । जसलाई हामीले नमुना दिनेछौँ उनीहरुले त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन । नमुना दिएको त ड्राफ्ट गर्न सजिलो होस् भनेर हो । उसले स्वीकृत गर्ने बेलामा कानुन त उसले बनाउन सकिहाल्छ । हामीले झन् सहजीकरण गरिदिएको हो । त्यसले उनीहरुलाई केही अप्ठेरो पर्दैन । यदि उनीहरुले अल्छ्याइँ गरे अर्कै कुरा हो । होइन भने त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर छुट्याएर राख्न, नयाँ बनाउन सक्ने ठाउँ छ । जहाँसम्म सङ्घले बनाउने कानुन हो त्यसका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
तपाईं सङ्घीयतालाई निकै राम्रो गरी अध्ययन गरेको, बुझेको कर्मचारीहमध्येमा पर्नुहुन्छ । हाल जितेर आएका र भावि आउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ?
आफ्नो सूचीअनुसारको काम गर्नुपर्यो । सबै काम एक्कै चोटि गर्न सकिन्न । मैले अघि नै प्रशिक्षणमा पनि भनेँ, थोरै पैसाले थोरै स्रोत साधनले धेरै परिणाम देखिने र नगरवासी सबैलाई समेट्ने किसिमका काम प्राथमिकताका दिनुपर्छ । यसमा विभेद गर्नु हुँदैन र गर्न नहुने काम भनेको स्रोत साधनले नधान्ने काम गर्नु हुँदैन । दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने काम दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र गर्नुपर्दछ ।
चर्चित हुने निर्णय गर्यो भने त्यो टिकाउ हुँदैन, किनभने स्रोतले पुग्दैन । त्यो भोलि उहाँहरुलाई नै अप्ठेरो पर्ने कुरा हो । एक÷दुई महिना हल्ला गर्ने निर्णय त गरेँ तर साथ दिएनन् भन्ने खालको कुराहरु आउँछन् । त्यसकारण दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोच सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्यो । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा मात्रै काम गर्नु पर्यो । साझा अधिकारको सूचीमा बसेर धेरै निर्णय गर्नुहुँदैन । साझा अधिकारमा माथिसम्मको लिङ्क हुने हुँदा सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा राज्यको सोच कस्तो छ र कसरी अगाडि बढिन्छ ?
होइन, भइरहेको छ ।
यसले कर्मचारीहरुमा निकै हलचल मच्याएको छ, कसरी भैरहेको छ त ?
हलचल त यासो छ, काठमाडौँमा भएका मान्छे बाहिर जान गारै हुन्छ । संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कानुन बनाएर गर्ने भन्ने ऐन पेस भइसकेको छ । मेरो एक किसिमको धारणा छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिज्ञलेले हामी एक तह बढुवा गरिदिन्थ्यौँ, मुख्य सचिवले मानेनन् भनेको पनि सुनेको छु । तर मेरो भनाइ के छ भने सङ्घीयता आएको कर्मचारीहरुले बोनस खान होइन, नागरिकले सेवा पाउन हो । तसर्थ एकदमै अप्ठेरो पर्ने गरी होइन कि अहिले जसको जे कार्यजिम्मेवारी छ त्यहीँ अनुसार खुरुक्क जानुपर्छ । जसको जे कार्य विवरणले जहाँ माग गर्छ त्यही अनुसार कर्मचारी जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
यद्यपि यो विषयमा संसदमा ऐन छ, अब उहाँहरुले छलफल गर्नु होला । त्यही अनुसार पारित गर्नु होला । तर मैले के भन्ने गरेको छु भने विवेकशील निर्मम निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र हामी समायोजनको कुरा र सेवा प्रवाहको कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । तसर्थ मेरो मान्छेलाई मर्का पर्यो भनेर सोच्ने हो भने कुरा बिग्रन्छ । त्यसैले एकदमै र्यासनल निर्णय गर्नुपर्छ तर विभेद गर्नु हुँदैन ।